IPad vaovao 2019 sy Apple Watch Series 5 | Vaovao momba ny gadget
Ho fanampin'ny iPhone 11 dia ity no naseho an'i Apple tamin'ny fehezanteny farany
Ignacio Sala | | SmartWatch, takela-bato
Minitra vitsy lasa izay dia nifarana ny fehezanteny famelabelarana ny iPhone 11 vaovao, hetsika izay, toy ny mahazatra dia nifantoka tamin'ny vokatra lehibe indrindra an'ny Apple, ny iPhone, fa tsy ho azy manokana, satria nanolotra ny fanavaozana ny iPad 2018 sy ny Apple Watch Series 5 ihany koa.
Nasehon'i Miguel namako anao ny vaovao rehetra izay tonga avy amin'ny andiany fahiraika ambin'ny folo an'ny iPhoneamin'ny nomenclature lava loatra ka tsy azo tononina, indrindra raha miresaka momba ilay maodely misy haben'ny efijery lehibe indrindra isika, iPhone 11 Pro Max. Raha te hahalala ny ambiny amin'ny vaovao natolotr'i Apple ianao dia manasa anao hanohy hamaky.
1.1 Ny vidin'ny IPad 2019, ny loko ary ny misy
2.1 Ny vidiny misy sy ny lokon'ny Apple Watch Series 5
Na dia tsy nanampy anarana farany teo amin'ity fitaovana ity aza i Apple, raha tianay ny manavaka azy amin'ny maodely teo aloha, tsy maintsy ampiantsika ny tagline 2019. Ity fidirana iPad vaovao ity, dia manolotra antsika ho efijery lehibe indrindra efijery 10,2-inch, amin'ity fomba ity dia hadinon'i Apple ihany ny iPad 9,7-inch izay niaraka taminay hatramin'ny nanombohana ny maodely iPad voalohany.
Toy ny iPad 2018, ny iPad 2019 Izy io koa dia mifanaraka amin'ny Apple Pencil, ny taranaka voalohany ihany. Raha tsy misy ny fahalalany ny masontsivana momba ny RAM, Apple dia nisafidy ny processeur A10 Fusion, ny mpikirakira izay hitantsika ao amin'ny iPad 2018 ihany.
Ny ambiny amin'ny famaritana an'ity iPad 10,2-inch ity, mitovy ihany izy ireo azontsika jerena amin'ny taranaka teo aloha, ka raha nikasa ny hanavao ny iPad 2018 ianao dia tsy hevitra tsara izany, raha tsy te-hahazo efijery 0,5 santimetatra fanampiny ianao.
Ankoatra izany, Miaraka amin'ny iOS 13, miakatra dingana maromaro ny iPad raha ny momba ny fampiasa izay natolotry ny iPad miaraka amin'ny iOS 12 antsika hatramin'izao, noho izany dia manokatra karazana mety ho fetra farany tsy voafetra izy io. Anisan'ireo zava-baovao atolotry ny iOS 13 antsika, ny mety hampifandraisana kapila mafy ivelany sy tsimatra USB amin'ny fitaovana hidirana sy hitantanana ny vaovao, ampifandraiso ny fifehezana PlayStation 4 na Xbox hankafizanao ny lalao tianao indrindra (misaotra an'i Apple Arcade). , ary ilay multitasking vaovao, izay manome antsika fihetsika sy fiasa vaovao izay mahatonga ny iPad ho soloina solosaina finday arakaraka ny fahazoantsika azy.
Ny vidin'ny IPad 2019, ny loko ary ny misy
Ny iPad 2019 dia misy amin'ny loko telo: volondavenona, volafotsy ary volamena habakabaka. Mikasika ny habaka fitehirizana dia mahita kinova roa izahay: 32 GB amin'ny 379 euro ary 128 GB amin'ny 479 euro. Raha tadiavintsika ny kinova miaraka amin'ny fifandraisana LTE, ny vidin'ny maodely 32 GB dia 519 euro ary ny 128 GB dia miakatra hatramin'ny 619 euro.
Taorian'ny fampidirana ny ECG tamin'ny taon-dasa tamin'ny Apple Watch Series 4, Apple dia nanana toerana kely hanatsarana azy ao amin'ity taranaka vaovao Apple Watch ity. Na izany aza, niverina hanaitra anay ity fitaovana ity noho ilay vaovao fampisehoana retina foana, efijery iray izay mampiseho antsika hatrany ny sehatra miaraka amin'ireo fahasarotana rehetra napetrakay.
Rehefa mihodina ny tanantsika isika mba hahita fampandrenesana na hanamarina ny fotoana, dia hazava ny efijery mba tsy ho sarotra ny miditra amin'ny fampahalalana asehony antsika. Araka an'i Apple, bateria dia mitoetra ho toy izany ihany noho ny tamin'ny taranaka teo aloha, noho izany dia tsy hiaritra fahasamihafana lehibe amin'ny lafiny fizakantena omeny antsika isika.
La kompà namboarina dia iray amin'ireo zava-baovao natolotry ny Apple Watch an'ny taranaka fahadimy, kompà izay misy koa mari-pamantarana ny haavony mba hahitantsika ny làlana hiverina any amin'izay alehantsika rehetra.
Ny zava-baovao izay manintona ny sain'ity taranaka fahadimy ity dia hita ao amin'ny fitaovam-pamokarana. Ny Apple Watch Series 5 dia misy ao amin'ny alimo, vy vy, titanium ary seramika. Miara-miasa amin'ny watchOS 6, ity Apple ity, toy ny maodely taloha nifanaraka tamin'ity kinova vaovao an'ny rafitra fiasa ho an'ny Apple Watch ity, dia azontsika ampiasaina ny metatra decibel izay hampahafantatra antsika rehefa afaka mametraka ny fiainantsika ny feo eo amin'ny tontolo iainantsika risika. fahasalamana amin'ny sofina.
Ny vidiny misy sy ny lokon'ny Apple Watch Series 5
Ity Apple Generation fahadimy ity dia mitazona ny vidiny mitovy amin'ny an'ny taranaka teo aloha, manomboka amin'ny 449 euro ho an'ny maodely 40-milimetatra miaraka amin'ny fitoeram-boaloboka ary mahatratra 1.449 ho an'ilay maodely misy fonosam-pasika sy 44 milimetatra.
Apple Watch miaraka amin'ny kesika aliminioma sy tranga milimetatra faha-4: 449 euro
Apple Watch miaraka amina alimina sy tranga 44 milimetatra: 479 euro
Apple Watch miaraka amina vy misy azy ary tranga milimetatra faha-4: 749 euro
Apple Watch misy fonosana vy sy tranga 44 milimetatra: 779 euro
Apple Watch miaraka amina kesika titanium ary tranga milimetatra 4: 849 euro
Apple Watch miaraka amina boaty titanium sy tranga 44 milimetatra: 899 euro
Apple Watch miaraka amina boaty seramika sy tranga 40 milimetatra: 1.399 euro
Apple Watch miaraka amina boaty seramika sy tranga 44 milimetatra: 1.449 euro
Apple dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny vidiny sy ny daty famotsorana ofisialin'ny Apple Arcade. Ny daty dia 19 septambra ary vidiny amin'ny 4,99 euro isam-bolana. Hatramin'ny nanombohany dia hanana lalao mihoatra ny 100 isika, lalao azontsika sintonina amin'ny fitaovantsika ary hahafahantsika milalao nefa tsy manana fifandraisana Internet maharitra.
Ity serivisy vaovao ity Izy io dia mifanaraka amin'ny iPad, iPad, iPod touch, Mac ary Apple TV, amin'izay isika dia afaka milalao ny lalao ankafizinay amin'ny fitaovana rehetra. Ny lalao rehetra misy amin'ity sehatra ity tsy manana fividianana fanampiny izy ireo ary tsy mampiseho doka. Ho fanampin'izany, ity sehatra ity dia mifanaraka amin'ny Ao amin'ny fianakaviana, noho izany amin'ny famandrihana iray monja, ny mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana iray dia ho afaka mankafy ny atiny misy rehetra.
Araka ny nomanina azy, Apple dia nanambara ny daty fandefasana ny serivisy horonantsary mivantana, serivisy antsoina hoe Apple TV +, serivisy izay havoaka amin'ny 1 novambra ary vidiny amin'ny 4,99 euro isam-bolana. Ity vidiny ity dia misy ny fidirana amin'ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviana ary manana fe-potoana fitsapana maimaimpoana maharitra 7 andro.
Raha mieritreritra ny hanavao ny iPhone taloha, iPad, iPod touch Mac na Apple TV ianao, Manome anao serivisy Apple TV + iray taona i Apple. Mba hahafahana mankafy ny atiny atolotray antsika ity serivisy horonantsary streaming vaovao ity dia tsy ilaina ny mamakivaky ny peratra an'i Apple, satria ho hita ihany koa ny fampiharana hidirana ao anatiny, manomboka amin'ny fararano, amin'ny fahitalavitra marani-tsaina sy ireo mpilalao horonantsary. Streaming.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » takela-bato » Ho fanampin'ny iPhone 11 dia ity no naseho an'i Apple tamin'ny fehezanteny farany
Fanontana GXT 540C Yula camo an'ny Trust Gaming: Ny gamepad be mpampiasa indrindra amin'ny tsena
Apple mandefa iPhone 11 sy iPhone 11 Pro: Vidiny, daty ary fiasa